HARARE, Zimbabwe (AP) — The United States has sanctioned Zimbabwe's state security minister over alleged human rights abuses, just hours after Zimbabwe's government defiantly marked its first Anti-Sanctions public holiday. State Security Minister Owen Ncube, a close ally of Zimbabwean President Emmerson...
Oct. 25, 2019 10:01 AM EDT
HARARE, Zimbabwe (AP) — The massive march that Zimbabwe's government tried to rouse for a new anti-sanctions public holiday appeared to fizzle on Friday, as just hundreds of people turned out in the capital, Harare, instead of the many thousands the ruling party had in mind. President Emmerson Mnangagwa's...
Oct. 22, 2019 8:12 AM EDT
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe has declared a new public holiday to protest U.S sanctions it says are hurting its economy — and the day comes with a state-sponsored festival. Anti-Sanctions Day will be commemorated on Oct. 25, acting information minister Amon Murwira said Monday, calling it a...
HARARE, Zimbabwe (AP) — When going shopping, the only thing Isaiah Macheku can budget for is shock. Hyperinflation is changing prices so quickly in Zimbabwe that what you see displayed on a supermarket shelf might change by the time you reach the checkout. "It is a nightmare," Macheku said. "I can't plan."...
Oct. 1, 2019 11:36 PM EDT
WASHINGTON (AP) — The Trump administration on Tuesday announced it is stopping imports of clothing, gold, diamonds and other items believed to have been produced with forced labor by companies based in Brazil, China and Malaysia as well as some gold mined in eastern Congo and diamonds from a region in...
Oct. 1, 2019 8:50 AM EDT
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe's opposition lawmakers walked out of Parliament on Tuesday as President Emmerson Mnangagwa presented his state of the nation address, a sign of the political tensions still gripping the country. The opposition Movement for Democratic Change party said it does not recognize...
Sep. 28, 2019 11:20 AM EDT
ZVIMBA, Zimbabwe (AP) — A priest asked God to take pity on Robert Mugabe as the family of the longtime Zimbabwean leader buried him Saturday at his rural home. They chose a private farewell for one of Africa's most divisive figures after a weeks-long dispute with the administration that forced him from...
Sep. 27, 2019 9:14 AM EDT
ZVIMBA, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe's longtime leader Robert Mugabe is expected to be buried on Saturday, a family spokesman said Friday, after three weeks of drama over the former strongman's final resting place. Security was tight around the rural home that now will be the burial site after an abrupt change...
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe's former president Robert Mugabe now will be buried at his rural home, a government spokesman said Thursday, the latest twist in the drama around the ex-strongman's final resting place. Nick Mangwana said the government "is cooperating with the Mugabe family in their new...
Sep. 25, 2019 10:32 PM EDT
NEW YORK (AP) — Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa appealed for patience Wednesday for his efforts to pull his country out of an economic collapse and called on the U.S. and Europe to lift "illegal sanctions" that he blamed for slowing down the recovery. Mnangagwa made no mention during an address to...